Befintlig sida: Soomaali
Waxaan kaa caawineynaa in aad heshid si aad sigaar cabidda iyo tubaako cunidda isaga joojisid!
Waxaan khadka taleefanka kugu siineynaa wadahadal taageero
Khadka Jooji Sigaarka iyo Tubaakada waxaa loogu tala galay adigaaga doonaya in aad taageero heshid marka aad iska joojineysid tubaakada iyo sigaarka. Annaga waxaad taleefanka noogala hadli kartaa caadooyinkaaga xagga sigaarka iyo tubaakada, iyadoon la eegeyn in aad sigaar cabtid, in aad shiishad cabtid iyo in aad tubaako cuntid. Xitaa xigtada isweydiinaysa sidii ay cid ku caawin lahayd waa la soo dhaweynayaa. Dhammaan wadahadalladu waa lacag la’aan, waxayna ahaan karaan kuwo qarsoodi ah.
Sidan ayuu wadahadal u dhici karyaa
Marka aad buuxisid foomka xiriirka ee hoose waxaa, badanaa muddo laba usbuuc gudohood ah, ku soo wacaya mid ka mid ah dadkeenna tubaakada iyo sigaarka dadka ka reeba. Waxaad mid ka mid ah lataliyayaasheenna luqadaha badan ku hadla si toos ah ugula hadli kartaa luqadda aad dooneysid, ama iyadoo la adeegsanayo turjumaan. Qaar ka mid ah kuwa nala soo hadla waxaa ku filnaan kara hal wadahadal halka kuwa kale ay u baahan karaan in ay taageero helaan marar fara badan. Taageerada waxaan waafajineynaa hadba sida aad tihid. Waxaa lagu siin karaa talooyin iyo tilmaamooyin ku aaddan dawo la isticmaali karo marka la rabo in sigaar iyo tubaako leyska joojiyo, laakin Khadka Iska Jooji Sigaarka- iyo Tubaakadu ma qori karyo warqad dhakhtar oo dawo lagu qaato. Si aad u heshid dawo uu dhakhtar kuu qoryay waa in aad dhakhtarkaaga la xiriirtaa.
Macluumaad fara badan oo ku aaddan waxa aad sameyn kartid si aad sigaarka iyo tubaakada isaga joojisid waxay ku jiraan halkan.
Buuxi foomkeenna xiriirka si aannu markaas kuu soo wacno, badanaa 2 usbuuc gudohooda. Uma baahnid in aad meel aaddid si aad noola kulantid -dhammaan xiriirradu waxay ku dhacaan khadka taleefanka.
Maxaad dooneysaa in lagaa caawiyo? In aan sigaar joojiyo In aan tubaako joojiyo In aan sigaar iyo tubaako joojiyo Horbaba waan iska joojiyay laakiin waxaan caawimaad u rabaa in aanan dib ugu laaban Waxaan ahay qof xigto ah
Dooro luqadda aad sii jeclaan lahayd in aad kula hadashid Khadka Jooji Sigaarka iyo Tubaakada? Ingiriis Soomaali